Bit By Bit - Kucherechedza maitiro - 2.4.3.2 enzanirana
Kufananidza kusika zvakanaka kuenzanisa kuburikidza Kubvisa kure nyaya.
Fair nevamwe vanogona kuuya kubva kana randomized dzinodzorwa kuedza kana dzinongoitika kuedza. Asi, pane mamiriro ezvinhu akawanda apo haugoni kumhanya akakodzera kuedza uye hunhu haana akapa dzinongoitika chiedzwa. Muzviruva izvi, nzira yakanakisisa kuumba wakanaka kuenzanisa ari chienderane. In enzanirana, nevatsvakurudzi anotarira kuburikidza vasiri experimental Data rokusika yegwara vanhu kuti akafanana kunze kuti munhu akave nokugamuchira kurapwa uye munhu asina. In nedanho enzanirana, vatsvakurudzi vari chaizvoizvo Kubvisa; ndiko kuti, kurasa zviitiko apo kusina pachena kuenzanisa. Saka, nzira iyi zvaizoramba zvakanyatsorurama kunzi enzanirana-uye-kuchekerera, asi ini ndichaenda akanamatirana pamwe chinyakare rokuti: enzanirana.
Muenzaniso simba chienderane dzekusimudzira muhombe non-experimental mashoko zvinyorwa akanaka anobva pakutsvakurudza pamusoro yevatengi chavanoitirwa Liran Einav uye nevamwe (2015) . Einav uye nevamwe vaifarira Auktionen kuitika pamusoro eBay, uye achirondedzera basa ravo, Ndichaenda kufunga Kunyanya chimwe: migumisiro okisheni kutanga mutengo pamusoro okisheni zvaitika, akadai pakutengeswa mutengo kana ndingangokuvara sero.
Zvikuru mano nzira kupindura mubvunzo pamusoro mugumisiro pokutangira mutengo pasero mutengo yaizova nyore kuverenga kwokupedzisira mutengo Auktionen vane zvakasiyana pokutangira mitengo. Izvi zvingava yakanaka kana uchingoda kufanotaura kutengeswa nomutengo kupiwa chinhu kuti akanga akapfeka eBay aine kupiwa pokutangira mutengo. Asi, kana mubvunzo wenyu chii mugumisiro kutanga mutengo uri pamusika zvaitika izvi hakushande nokuti haibvi pane zvakanaka kuenzanisa; ari Auktionen hwakaderera pokutangira mitengo kungava kwakasiyana Auktionen pamwe yakakwirira pokutangira mitengo (semuenzaniso, vagomupa kuva mhando dzakasiyana nhumbi kana anosanganisira mhando dzakasiyana-siyana nemafirimu).
Kana uchitova hanya nokuita zvakanaka kuenzanisa, unogona tisangosiya mano dzinoswedera uye funga achimhanya munda kuedza pawakandipikira vaizvitengesa yakananga chinhu-ngatitii, Golf Club-ane yakamisirwa akagadzirwa okisheni parameters-muti, vakasununguka kutumirwa, okisheni pachena kwevhiki mbiri, etc.-asi randomly kuisa kutanga mitengo. Nokuenzanisa kunoguma musika zvaitika, ichi munda kuedza Aizopa kuyerwa kwazvo zvakajeka migumisiro kutanga mutengo pasero mutengo. Asi nekuyera ichi dai chete anoshandawo imwe chigadzirwa uye akaisa pamusoro okisheni parameters. Migumisiro zvingave zvakasiyana Somuenzaniso, nokuti marudzi akasiyana zvigadzirwa. Pasina simba dzidziso, zvakaoma extrapolate kubva chete kuedza ichi zvizere siyana zvichiita kuedza kuti angadai kumhanya. Uyezve, munda kuedza zviri zvakakwana zvinodhura kuti zvaizova infeasible kumhanya Zvakwana pavo kufukidza parameter yose inosvika zvinhu uye okisheni mhando.
Kusiyana mano kusvika uye experimental kusvika, Einav uye vashandi kutora nzira wechitatu: enzanirana. The chikuru Wandinyengedzerei yavo inzira kuwana zvinhu zvakafanana kumunda kuedza kuti kare zvakaitika eBay. Somuenzaniso, Figure 2.6 inoratidza zvimwe 31 hwesaruro nokuda anawo Golf Club-mumwe Taylormade Burner 09 Driver-achitengeswa anawo seller- "budgetgolfer". Zvisinei, zvinyorwa izvi zvine unhu siyanei. Gumi nerimwe vavo kupa mutyairi kuti wakaiswa mutengo $ 124,99, ukuwo mamwe 20 Auktionen vane zvakasiyana magumo mazuva. Uyewo, zvinyorwa dzakasiyana kutumirwa mari, kana $ 7,99 kana $ 9,99. Mune mamwe manzwi, zvinoita sokuti "budgetgolfer" achimhanya kuedza kuti vaongorori.
The hwesaruro of Taylormade Burner 09 Driver achitengeswa "budgetgolfer" tiri muenzaniso mumwe vachiwirirana yakatarwa hwesaruro, apo chaipo chinhu iroro riri kutengeswa nokuda chaiwo chete mutengesi asi nguva imwe neimwe pamwe unhu siyanei. Mukati hombe matanda ose eBay pane chaizvoizvo mazana ezviuru vachiwirirana seti chokuita mamiriyoni hwesaruro. Saka, pane kuenzanisa yokupedzisira mutengo Auktionen zvose mukati pamamiriro pokutangira mutengo, Einav uye vashandi nevamwe mukati vachiwirirana pazvinhu. Kuti chokubatanidza zvawanikwa kubva enzaniso mukati mazana izvi ezviuru vachiwirirana rinovira, Einav nevaaishanda navo apiwa ataure pokutangira mutengo uye yokupedzisira mutengo tichitarisa nezvezvinotaurwa kukosha chinhu chimwe nechimwe (semuenzaniso, ayo avhareji Kutengeswa mutengo). Somuenzaniso, kana Taylormade Burner 09 Driver ane bhuku kukosha $ 100 (kunobva rokutengesa ayo), ipapo munhu pokutangira mutengo $ 10 kwaizoratidzwa kutaurwa sezvo 0.1 uye chokupedzisira mutengo $ 120 kwaizoratidzwa kutsanangurwa 1,2.
Figure 2.6: Muenzaniso vachiwirirana yakatarwa. Ndiwo chaiwo chete kirabhu gorofu (a Taylormade Burner 09 Driver) achitengeswa chaiyo chete munhu ( "budgetgolfer"), asi vamwe wokutengesa izvi Zvaiitirwa ezvinhu akasiyana (semuenzaniso, yakasiyana pokutangira mutengo). Figure yatorwa Einav et al. (2015) .
Yeuka kuti Einav uye nevamwe vaifarira mugumisiro kutanga mutengo pamusoro okisheni zvaitika. Chokutanga, vachishandisa Linear regression zvinofungidzirwa kuti dzakakwirira pokutangira mitengo kuchiderera ndingangokuvara sero, uye kuti dzakakwirira pokutangira mitengo kuwedzera wokupedzisira pakutengeswa mutengo, zvimiso pamusoro sero kuitika. By pachavo, inofungidzirwa-izvo aya neavhareji pamusoro zvigadzirwa zvose uye kufunga munhu Linear ukama pakati pokutangira mutengo uye yokupedzisira zvaitika-havasi kuti anonakidza zvose. Asi, Einav uye nevamwe uyewo kushandisa hombe kukura mashoko avo kufungidzira-siyana zvikuru dzisinganyatsooneki zvakawanikwa. Chokutanga, Einav uye nevamwe vakaita inofungidzirwa izvi oga zvinhu pamusoro mitengo siyana uye pasina kushandisa Linear regression. Vakawana kuti apo ukama pakati kutanga mutengo uye ndingangokuvara sero ndiko Linear, ukama pokutangira mutengo uye sero mutengo zvakajeka vasiri Linear (Figure 2.7). Kunyanya, nokuti kutanga mitengo pakati 0,05 uye 0,85, pokutangira mutengo ane zviduku zvazvinoita pasero mutengo, zvaonekwa kuti rakapera kurashikirwa vari kuongorora kuti akanga vaifungidzira munhu Linear ukama.
Akasabvumirana 2.7: Ukama pakati okisheni kutanga mutengo uye ndingangokuvara sero (kuruboshwe emadziro) uye sero mutengo (kurudyi paneeli). Pane nehasha munhu Linear ukama pakati kutanga mutengo uye ndingangokuvara sale, asi pane asiri Linear ukama pakati kutanga mutengo uye Sale mutengo; kutanga mitengo pakati 0,05 uye 0,85, pokutangira mutengo ane zviduku zvazvinoita pasero mutengo. Muzviitiko zvacho zvose, kudyidzana ndezvaJosephus pasina chinhu ukoshi. Calculators izvi obudisa Fig 4a uye 4b Einav et al. (2015) .
Chechipiri, pane avhareji pamusoro zvinhu zvose, Einav uye nevamwe uyewo kushandisa hombe kutambudzwa mashoko avo kufungidzira matambudziko kutanga mutengo kuti 23 akasiyana Mapato ezvinyorwa (semuenzaniso, dzinovaraidza zvokushandisa, zvemagetsi, uye mitambo zvaiva nechokuita nechitendero) (Figure 2,8). inofungidzirwa izvi zvinoratidza kuti zvimwe zvinoita zvinhu-zvakadai zvaiva nechokuita nechitendero-kutanga mutengo une nomugumisiro duku pamusoro ndingangokuvara sero uye yakakura nomugumisiro hwokupedzisira sero mutengo. Uyezve, nokuti zvakawanda commodified zvinhu-zvakadai maDVD nemavhidhiyo-pakutanga mutengo ane anenge asina kukanganisa yokupedzisira mutengo. Nemamwe mashoko, paavhareji iro rinobatanidza unobva 23 akasiyana Mapato zvinhu anovanza mashoko anokosha pamusoro kusiyana pakati zvinhu izvi.
Akasabvumirana 2.8: Results akaratidza inofungidzirwa kubva woga woga nomumwe; iri kumucheto takasimba Zvinofungidzirwa kuti muzvikwata zvose ikaunganidzwa pamwe chete pamwe chete (Einav et al. 2015, Table 11) . inofungidzirwa izvi zvinoratidza kuti zvimwe zvinoita zvinhu-zvakadai zvaiva nechokuita nechitendero-pakutanga mutengo ine mugumisiro duku pamusoro ndingangokuvara sero (x-akabatana) uye yakakura nomugumisiro hwokupedzisira pakutengeswa mutengo (Y-akabatana).
Kunyange kana iwe usiri kufarira Auktionen musi eBay, unofanira kuyemura nzira nhamba 2.7 uye mufananidzo 2,8 kubayira dzakapfuma kunzwisisa eBay pane nyore Linear regression inofungidzirwa kuti tisafunge Linear ukama nokubatanidza Mapato mazhinji akasiyana zvinhu. Ava inofungidzirwa yakasvinuka zvinoratidza simba chienderane mu hombe mashoko; inofungidzirwa izvi kunge zvisingabviri pasina wakakura nhamba yomunda kuedza, izvo angadai prohibitively zvinodhura.
Zvechokwadi, tinofanira kuva shoma kuvimba migumisiro ipi chaiyo enzanirana kudzidza pane tingada iri migumisiro yakafanana chiedzwa. Apo dzinoongorora kunobva upi enzanirana kudzidza, pane zviviri zvinokosha zvaimunetsa. Chokutanga, tinofanira kuyeuka kuti tinogona chete nechokwadi vakanaka kuenzanisa zvinhu akashandiswa enzanirana. In chavainyanya nemigumisiro, Einav uye nevamwe vakaita mhindu chienderane pamusoro unhu mana: mutengesi ID nhamba, chinhu chega, chinhu rokuremekedza, uye musoro wenyaya muchikamu. Kana zvinhu zvakanga zvakasiyana nenzira yakanga isina kushandiswa enzanirana, kuti aigona kusika isingaruramisiri kuenzanisa. Somuenzaniso, kana "budgetgolfer" wakaderedzera mitengo nokuda Taylormade Burner 09 Driver munguva yechando (apo gorofu zvikwata zviri zvishoma yakakurumbira), saka aigona kuonekwa kuti nechepazasi pokutangira mitengo dzinotungamirira tikarega rwokupedzisira mitengo, kana mune chokwadi ichi kwaizova bhokisi pamusoro pamwaka kusiyana kudiwa. Kazhinji, nzira yakanakisisa yokutaura dambudziko iri rinoita kuti kuedza mhando dzakasiyana-siyana dzezvirwere enzanirana. Somuenzaniso, Einav uye vashandi vachidzokorora Ongororo yavo apo vachiwirirana seti zvinosanganisira zvinhu pasero mukati gore rimwe, mukati mwedzi mumwe chete, uye contemporaneously. Kuita nguva hwindo tighter zvinoderedza uwandu vachiwirirana rinovira, asi kunoderedza nezvemhosva mumwaka kushanduka. Sezvineiwo, vanozoona kuti migumisiro kuchinja nokuda ndachinja chienderane zvinodiwa. Munguva enzanirana mabhuku, kwakadai hanya kunowanzoratidzirwa tichitarisa observables uye unobservables, asi chinoita pfungwa chaizvo kuti vatsvakurudzi chete nokusika akanaka kuenzanisa pamusoro zvinhu zvaishandiswa enzanirana.
The kunetsa chechipiri apo nokududzira chienderane zvawanikwa ndechokuti ivo chete anoshandawo vachiwirirana mashoko; havafaniri anoshanda nyaya rusingabviri vachiwirirana. Somuenzaniso, nokusanyanya tsvakurudzo yavo zvinhu akanga hwesaruro akawanda Einav uye nevamwe vari tichifunga kwounyanzvi semi-nyanzvi nemafirimu. Saka, apo ichiturikira kuenzanisa izvi tinofanira kuyeuka kuti ivo chete anoshanda subset iyi eBay.
Enzanirana ndiye nzira simba dzokuwana wakanaka kuenzanisa huru datasets. Yokushamwaridzana masayendisiti akawanda, enzanirana sokuti yechipiri-zvakanakisisa kuedza, asi kuti ari kudavira kuti chinofanira yakadzokororwa, zvishoma. Enzanirana mune muhombe Data chingava nani pane vashomanana munda kuedza apo: 1) heterogeneity muna nemigumisiro zvinokosha uye 2) pane zvakanaka observables nokuda enzanirana vari. Table 2.4 rinopa dzimwe mienzaniso sei chienderane kunogona kushandiswa guru mashoko zvinyorwa.
Table 2.4: Mienzaniso zvidzidzo dzinoshandisa enzanirana kuwana akanaka kuenzanisa mukati digitaalinen zvisaririra.
, zvinhu pfungwa
Big date mabviro
Mugumisiro kungopfura zvechisimba mapurisa Regai-uye-frisk zvinyorwa Legewie (2016)
Zvinovapo September 11, 2001 mhuri nevavakidzani dzokuvhota marekodhi kuzozvidzorerwa zvinyorwa Hersh (2013)
Social contagion Communication uye chigadzirwa wokugamuchirwa date Aral, Muchnik, and Sundararajan (2009)
Mukugumisa, kunyengedzwa nzira kuti kupima causal migumisiro nevasiri experimental Data vane ngozi. Zvisinei, nzira yokuita causal inofungidzirwa nhema pamwe continuum kubva chokuramba dukusa, uye vatsvakurudzi vanogona kuona zvakanaka kuenzanisa mukati non-experimental mashoko. Kukura nguva dzose-mberi, guru mashoko gadziriro kunowedzera kukwanisa kwedu zvinobudirira kushandisa miviri huripo nzira: dzinongoitika kuedza uye enzanirana.